SOMALI THINK TANK » Xalka Falsafadaysan ee Xanaaqa!
You are here: Home / Culture, Featured Articles, Religion / Xalka Falsafadaysan ee Xanaaqa!
Xanaaqa oo ah dareen ku abuuran noole badan ayaa mararka qaar horseeda dhibaatooyin dhaxal xumo reeba. Dadka uu xanaaqa dhaxalsiiyay dhibaatooyinka aan dhamaadka lahayd waxaa ka mid ah Soomaalida oo si dirqi ah ugu nool dacalada aduunka. Dood badan kama taagna in qofka Soomaaliga ah marka lagu daro adiga aqristaha ah iyo anigaba in xanaaqa noo yahay dareen dabiici ah oo nolosha aan ku maareyno.
Maalintii aan garaadsaday ilaa waqtigan la joogo waxaa xasuustayda ku kaydsamay dad tiro badan oo siyaabo kala duwan aan iskugu xanaaqnay. Dadkaas aan is xumaansanay waxaan ula muuqday wax-magarad fuley ah oo shaqo ka dhigtay in hadba uu muran macno darro ah dadka la soo doonto. Dhanka kale, qof walba ama qolo kasta aan isku qaro baxno waxay iigu muuqdeen doqomo aan dan iyo muraad midna ka lahayn guulaha laga gaari karo doodaha maangalka ah ( logic).
Sidaas si la mid ah, dadka Soomaaliyeed ee siyaabaha kala duwan iskugu caraysan waxay ku doodaan in qof walba, qofka kale uu daandaansi iyo doqoniimo ula yimid. Haddaba arintan waxaa laga dhaxlay in qalbiga la iska naco ka dibna af iyo adin la iskula tago. Waa taariikh dheer oo looga bogan karo oo kaliya qoraalo cilmi ah oo wax ka qora qaababka kala duwan ee dadka Soomaaliyeed iskugu xanaaqeen. Ilaa hadda xal dhab looma hayo xanaaqa dadka Soomaaliyeed u diiday in ay dareemaan farxada iyo quruxda ku lamaansan nolosha.
Culimada nafsiga ayaa isku dayay in xanaaqa xal u raadiyaan ayagoo uruuriyay cilmi dhan oo gacan ka gaysan kara daweynta carada iyo ciilka. Cilmigaas ay uruuriyeen wuxuu ka koobanyahay talooyin “ counseling’ iyo waliba dhiraadhirin dhimireed “ Psychoanalsis” si qofka caraysan loo dajiyo ayadoo la adeegsanayo farsamada dhayida-dhimirka “ Psychotherapy” . Inkastoo Culimada nafsigu dadaaleen, haddana kuma aysan guulaysan in dawo dhamasytiran u horseedaan bukaannada la ildaran xannuunada maskaxa ee laga dhaxlay dareenka xanaaqa waayo waxaan argagnaa dad culimada nafsigu maalmo ay la taliyeen ama daaweeyeen oo muddo ka dib caradii iyo ciilkii qaab sidii hore ka xoogan u dareema.
Sidoo kale, mararka qaar wadaadada ayaa jeediya wacdi diimaysan oo ku aadan xalka iyo qaababka looga bogsan karo carada iyo ciilka. Sida caanka ah, wadaadadu waxay dadka kula taliyaan in la-acuudu billeysto si sheydaanka dadka isku diray loo naaro, mararka qaarna waxay intaas ku daraan in weyso iyo wardi lagula dagaalamo carada dhex ceegaagta qalbiyadeena. Inkastoo wadaadadu dadaaleen, haddana kuma aysan guuleysan in xal kama danbeys ah u keenaan xanaaqa waayo sida aan ognahay dadka Soomaaliyeed ee dareenka xanaaqa calanka u sida waxaa hormuud u ah wadaadada qudhooda . Halkan ka aqri qoraalka oo dhan